Monday July 20, 2020 - 11:07:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xanuun uu kusoo booday Boqorka camiilka ah ee maamula dowladda Aala Sacuud.
Salmaan Bin C/Caziiz ayaa la dhigay isbitaal kuyaal magaalada caasimadda ah ee Riyaadh sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ugu sarraysa dowladda Sacuudiga.
Wakaaladda wararka ufaafisa Aala Sacuud ayaa la sheegay in uu ka xanuunsanayo dhuunta, booqasho uu madaxweynaha Ciraaq ku tagi lahaa Sacuudiga ayaa dib loo dhigay sababa laxiriira xanuunka Salmaan Bin Cabdul Caziiz.
Dhinaca kale Hoggaamiyaha dowladda dabadhilifka dalka Kuweyt ayaa loola cararay isbitaal kuyaal gudaha wadankaas kadib markii ay xumaatay xaaladiisa caafimaad.
Wakaaladda wararka ufaafisa Kuweyt ayaa sheegtay in cisbitaalka la dhigay Sabaax al-xamed Jaabir alsabaax oo ah amiirka wadanka kaasi oo da'diisu tahay 91 sano.
Wararku waxay sheegayaan in inta badan awoodda maamul ee wadanka lagu wareejiyay dhaxal sugaha Kuweyt ninka lagu magacaabo Nawaaf Al-axmed aljaabir alsabaax oo isna 83 sana jir ah.
Wasiirka diiwaanka amiiriga oo ah nidaam looga dhaqmo dalka Kuweyt ayaa sheegay in xaaladda hoggaamiyaha xanuunsanaya ay tahay baaritaanno caafimaad oo kaliya isagoo dafiray in sababta isbitaalka loo dhigay ay tahay xanuun kusoo booday.
Sanaddii 2019 ayuu amiirka Kuweyt galay isbitaal kuyaalla wadanka Mareykanka isagoona ku jiray muddo lix isbuuc ah, Sabaax Al- axmed ayaa talada wadanka Kuweyt qabtay sanadii 2006 bilaawgeedi wuxuuna caan ku yahay sida uu isku barbar taagay xamladii saliibiga aheyd ee G.W.Bush uu ku iclaamiyay muslimiinta.
Dalka yar ee Kuweyt balse hodonka ku ah saliidda iyo dahabka waxaa kuyaal mid kamida saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada saliibiyadda Mareykanka ay uga suganyihiin dhulka Jaziiradda Carabta.
Sacuudiga oo Kumanaan qof Itoobiyaan ah dalkiisa ka tarxiilaya.